Misimboti & Basa - Sichuan Junling Technology Co, Ltd
Kukosha Kwedu, Mufambiro uye Maitiro
Kubudikidza nekucherechedza nekungwarira maitiro ehupenyu hwemhuka uye hunhu hwemhuka, Jun Ling anovandudza zvigadzirwa kuti awane kuchengetedzwa kuri nani kwezvipfuyo, uye panguva imwechete, zvine zvazvinoita kune varidzi vezvipfuyo.
Junling anozvipira kuita kugona mune zvese zvatinoedza kuita. Isu tinovavarira kuita bhizinesi nenzira inowirirana uye yakajeka necustomer yedu uye hatibate masheya ekuenzana muzvinhu zvevatengi vedu. Vatengi vanoisa kuvimba kwakanyanya matiri, kunyanya kana zvasvika pakubata ruzivo rwakavanzika uye rwakavanzika. Mukurumbira wedu wekutendeseka uye kubata zvakanaka kwakakosha mukuhwina nekuchengetedza kuvimba uku
◆ Code of Ethics
Iyo Junling Code yeEthics uye Junling mapurisa anoshanda kune vese vatungamiriri veJunling, maofficial, uye vashandi vekambani. Izvo zvakagadzirirwa kubatsira mushandi wega wega kubata mamiriro ebhizinesi zvine hunyanzvi uye zvakaenzanirana.
◆ Kambani Kutonga
Junling anozvipira kuomerera pamisimboti yakanaka yekutonga kwemakambani uye atora maitiro ehutongi hwekambani
◆ Basa reVanhu, Sosaiti uye Nharaunda
Nhasi "mubatanidzwa wemagariro mutoro" miromo inopisa kwazvo kutenderera pasirese. Kubva kuvambwa kwekambani mu2015, kunaJunling basa revanhu uye nharaunda rakaita chinzvimbo chakakosha kwazvo, icho chaigara chiri kunetsekana kukuru kune muvambi wekambani yedu.